MR MRT: နံနက်ခင်းသတင်း
ရွာက ဖုန်းဆက်တာပဲ။ ရွာလာတဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောတယ်တဲ့။ သူတို့လည်း “ရာဟုလာ”လို သင်တန်းတွေ ဖွင့်ဖို့ပြင်နေတာမို့ ဟန်ရတာပဲတဲ့။ “ရာဟုလာ”ကို လိုလားတဲ့ပုံ။
“နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက ညွှန်ကြားလွှာများ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်တော်ကြီးထဲက အခန်း (၂) အပိုဒ်(၉)ဆိုလား၊ အခန်း (၉) အပိုဒ် (၂)ဆိုလား ဆိုတာကြီးကို ကိုးကားပြီး “ရာဟုလာ”ကို ကန့်ကွက်တော်မူချင်ကြတဲ့ ရွာက (လူလည်ကြီး သားတော်ကြီးများ) ရပ်ရွာဦးခေါင်း ကျောင်းထိုင်ကျောင်းပိုင် သံဃာစစ်သံဃာမှန် လဇ္ဇီပေသလ သိက္ခာကာမ ရတ္တညူ မဟတ္တ ဗျတ္တိပဋိဗလ အရှင်မွန် အရှင်မြတ် ဆရာတော် ကြီးတွေနဲ့တော့ ကွာသား။
သောကြာနေ့ ရွာပြန်မှ သူတို့နဲ့ တွေ့ရအုံးမယ်။
စိုင်ပြင်ကြီး၊ ဒီပဲယင်း၊ စစ်ကိုင်း
Posted by Ashin Acara. at 5:44 PM
u min naung November 18, 2012 at 8:08 AM
Ven Acara, I revere you. Keep on working hard.
U Min Naung